Faah Faahin: Qarax ka dhacay Guri ku yaala degmada karaan ee gobolka Banaadir – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaFaah Faahin: Qarax ka dhacay Guri ku yaala degmada karaan ee gobolka Banaadir
Faah Faahin: Qarax ka dhacay Guri ku yaala degmada karaan ee gobolka Banaadir
Hiiraan Xog, jan 12,2018:- Guri ku yaala degmada kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxaa xalay ka dhacay qarax la sheegay in lagu dhax diyaarinayay guriga,
Qaraxan oo laga maqlay qaar ka tirsan xaafadaha degmada ayaa ahaa mid loo adeegsaday Gaari, kaasi oo sida Ciidamada ammaanka ay sheegeen in lagu diyaarinayay guriga uu ka dhex dhacay.
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka oo wata gaadiidka dagaalka ayaa soo gaaray guriga uu ka dhax dhacay qaraxa, waxaana ay halkaasi kala baxeen nin ku sugnaa guriga, oo looga shakisan yahay in qorshahan uu watay.
Sidoo kale Hay’adaha ammaanka ayaa la wareegay guriga qaraxa uu ka dhacay, ilaa laga soo saarayo baaritaanada ugu dambeeya, ee la xiriira qaraxan iyo cida ka dambeysay.
ilaa hadda si dhab ah looma khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxan, oo dadka degaanka xalay ku abuuray cabsi iyo dareen feejignaan ah.
Ugu dambeyntii 25-kii October 2017 inta u dhaxeysa xaafada Buurta Diikow iyo Masjidka Irshaad ee degmada Kaaraan xilli habeen ah waxaa ka dhacay Qarax guri lagu diyaarinayay, Hal qof ayaa ku dhintay qof kalena wuu ku dhaawacmay.
DAAWO VIDEO: Xildhibaano ka socda Dowlada Federaalka oo tagay Baladweyne
Nin kaligiis waddo u dhisay dadka tuulada uu degenyahay